Samarekha.com.np :: हिंसामुक्त नगर बनाउँछौं |
हिंसामुक्त नगर बनाउँछौं
|| 117 Views || Published Date : 14th September 2017 |
स्थानीय तह निर्वाचनले शासन सञ्चालनमा महिला सहभागिता बढाएकोमा दुईमत छैन । प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले पनि महिला सहभागिता बढाउन सहयोग गर्यो । उपप्रमुखमै भए पनि धेरै महिलाहरु चुनाव जित्ने वाता वरण बन्यो । यसै सन्दर्भमा रोल्पा नगरपालिकाकी उपमेयर मनकुमारी घर्तिमगर कमलासँग समरेखाकालागि रोल्पा प्रतिनिधि देवी गुरुङले गर्नुभएको कुराकानी । सम्पादक
१. महिला संगठन हुँदै उपमेयरसम्म आईपुग्दाको राजनीतिक जीवनबारे संक्षिप्तमा बताईदिनुस् न ?
म एउटा गरीब सामान्य परिवारमा जन्मिएको चेली हुँ । ममा २०४७÷४८ मा बहुदलको प्रभाव परेको थियो । त्यसबेला मोटो मसाल भन्ने थियो । उतिबेलै टोल संगठन हुँदै गाविस मूल समितिमा आवद्ध भएँ । २०५२ सालमा जनयुद्धको शुरुवात भयो । जब माओवादी पार्टीको उदय भयो त्यति बेलामा झूठ्ठा मुद्दामा जेल चलानी गर्ने, मार्नेजस्ता कार्य राज्यपक्षबाट गर्न थालेपछि म त्यतिबेलादेखि नै सचेत भएर पार्टीमा लाग्दै आएँ । पछि एरिया कमिटी हुँदै महिला संगठनमै काम गर्दै अघि बढेँ । दुई कार्यकाल जिल्ला अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय सदस्य भएँ । अहिले पार्टीको साथ, सम्पूर्ण मतदाताहरुको साथ र सबैको सहयोगका कारण म उपमेयरसम्म आईपुगेको हुँ ।
२. देशको महत्वपूर्ण पदमा महिलाको सहभागिता भएता पनि निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा किन पहुँच नपुगेको होला ?
अहिले देशको महत्वपूर्ण स्थानमा महिलाहरुलाई अगाडि बढाउने सवालमा हिँजोको तुलनामा आज धेरै महिलाहरुको पहुँच पुगेको अवस्था छ । अहिले राज्यले समानुपातिक र समावेशी ढंगले अगाडि बढाउने संविधानमै उल्लेख गरेर अगाडि बढाएकाले नै आज हामी यो स्थानमा आएका छौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि हिजोको समाज, हाम्रो सामाजिक संरचना र पितृसत्तात्मक सोंचका कारण आज पनि आत्मसंघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कार्यान्वयनको सन्दर्भ पनि त्यसैगरी नै जोडिएको होला भन्ने मलाई लागेको छ । पितृसत्तात्मक सोंचको उपज जुन , छ त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न आवश्यक छ । महिलाहरु आफैं पनि सशक्त र कर्तब्यबोध हुन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने कार्यान्वयनमा पनि पहुँच हुनेछ । हाल कार्यान्वयन तहमा देखिएको समस्या पनि यही हुन सक्छ ।
३. तपाईको पाँचवर्षे कार्यकालमा महिला, आदिवासी जनजाति, बालबालिका, दलित र पछि पारिएका वर्गको हक र अधिकारका निमित्त कस्ता योजनाहरु ल्याउनुहुन्छ ?
जनताले मलाई रोल्पा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा बिजयी गराउनुभएको छ । मतदाताले जुन आशा राखेर मलाई मत दिनुभयो । उहाँहरुको आशा नै मेरो पहिलो जिम्मेवारी हो । पाँचवर्षे मेरो कार्यकालमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र पिछडिएका जाति र वर्गका लागि अबको नगरसभामार्फत कार्यक्रमको खाका कोर्नेछु ।
४. राजनीतिक संगठनमा होस्, नीति निर्माणमा होस् वा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा होस् महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितासँगै रोल्पा नगरपालिका भित्रका महिलाहरुलाई सशक्तिकरण गर्न के आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
नीतिगत सवालमा महिलाहरुलाई चेतना अभिबृद्धिका लागि मेरो पहिलो सुझाव यो हो की अधिकारसँगै कर्तब्य बोध गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । आफ्नो कर्तब्यप्रति सदैव सचेत हुन अनुरोध गर्दछु । अधिकार र कर्तव्यका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रमा हामी महिलाहरुले नै हात हाल्नुपर्छ । आफ्नो अधिकार अरुबाट आश गरेर सम्भव छैन । यसो भयो भने मात्रै सशक्तिकरणको पाटोले फड्को मार्नेछ । यदि मेरो जुनसुकै सहयोग आवश्यकता हुन्छ त्यसको म सदैव साथ दिन तयार छु ।
५. आज पनि ग्रामीण भेगका महिलाहरु घरमै सुत्केरी हुने, धामीझाँक्री गर्ने गरेकै कारण कैयौंको ज्यान गएको छ, कैयौं महिलाहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, नगरपालिका भित्रका थुप्रै वडाहरुमा बर्थिङ सेन्टर छैन यी समस्या समाधानका लागि तपाईको पहल के हुन्छ ?
ग्रामीण भेगका महिलाहरुले यो समस्या झेलिरोखका छन् । स्वयं म पनि त्यसको भागेदार हुँ । मैले पनि झेलेको हुँ । त्यसकारण मलाई राम्रोसँग थाहा छ । गाउँगाउँसम्म चुनाबी प्रचारको लागि पुग्दा खेरी धेरै महिला दिदी बहिनीहरुसँग भेट भयो । उहाँहरुको समस्या, वस्तुगत अवस्थालाई राम्रोसँग नियालेको छु । मैले त्यतिबेला पनि बचन दिएको थिएँ महिलाहरु उपचार अभावका कारण मर्न नपरोस् भन्नेतिर मेरो ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । हाम्रो नगरपालिकाको हरिकाटीना, नम्ली लगायतका विभिन्न स्थानहरुमा महिलाहरुको निकै कष्टकर जीवन बितिरहेको छ । मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण समस्या समाधानका निम्ति म लागि पर्नेछु । महिलाहरुको समस्या समाधानका लागि नीति निर्माण गर्नेछु । योजनासहित कार्यान्वयनमा जानेछु ।
६. आय आर्जन गर्न नसकेकै कारण महिलाहरु घरेलु हिंसामा पर्ने गरेका छन् उनीहरुलाई आर्थिक सशक्तिकरण तर्फ बढाउन तपाईको प्रयास के हुनेछ ?
आर्थिक आधार नभएकै कारण भन्नुभन्दा पनि शुरुमा चेतना नै हो । चेतनागत रुपले सशक्तिकरण गर्दै आर्थिक आधार तयार गर्नको निम्ति हामीले नीतिगत सवाललाई अगाडि बढाउने योजना ल्याईरहेका छौं । महिला, युवा, दलित, जनजाति, सबै वर्गलाई क्षमताका आधारमा घरेलु तालिम दिएर हुन्छ की, कृषि तालिम दिएर हुन्छ की, समस्या समाधान गरिनेछ ।
७. बढ्दो लैंगिक हिंसा, बालबालिकामाथि हुने अपराध नियन्त्रणका लागि के आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
महिला माथिको हिंसा यो हिजोको समाजको उपज हो । हिजोभन्दा आज धेरै सुधार भएको छ । हिजो पनि धेरै थियो तर बाहिर आएको थिएन आज बाहिर आएको छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ की महिलाहरु केही मात्रामा सचेत भएका छन् । एउटा कुरा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, समाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको अधिकार स्थापित गराउन सक्यौं भने हामी हिंसाबाट टाढा रहनेछौं । प्रायः हिंसा घरभित्रैबाट हुने गरेका छन् । पुरुष मात्रै होईन यो महिलाहरुका कारण पनि हुने गरेको छ । महिला आफूले आफूलाई सधै कमजोर छोरीको रुपमा मात्र परिभाषित गर्दछ । त्यसकारण पनि हिंसाको शिकार भइरहेको छ । आफू सचेत बनौं । असम्भव भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन । आफ्नो सजगतासँगै सामाजिक अगुवाईमा बढी क्रियाशील बनौं । यसो गर्दा पनि धेरैहदसम्म महिला हिंसाको न्यूनिकरण हुनेछ ।
८. रोल्पाका महिला तथा बालबालिकाहरु अत्याधिक मात्रामा इँटा भट्टा जाने क्रम तीब्र छ, अनि आत्महत्याको अवस्था पनि डरलाग्दो छ, यी कुराहरुलाई रोक्न नगरपालिकाले केही गर्नसक्छ ?
बेरोजगारीकै उपज गाउँघरका महिलाहरु इँटाभट्टामा जाने गरेका छन् । अर्को कुरा मदिराको छरपस्ट उत्पादन गर्ने क्रियाकलाप भएको छ । यसलाई बन्द गरिनु पर्छ । आफूसँग भएको क्षमता र सीपको प्रयोग गरेर दीर्घकालीन व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ । सामूहिक कामबाट हुन्छ की कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय गरेर हुन्छ यसलाई थालनी गर्न आवश्यक छ । धेरै महिलाहरु इँटाभट्टामा पुगेर हिंसाको शिकार बन्ने गरेका छन् । बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । यसमा अभिभावक पनि जिम्मेवार बन्नु आवश्यक देखिन्छ । अभिभावकहरुले पनि सचेतता अपनाउनुपर्छ । आत्महत्या जस्ता कार्य पनि हिंसाकै कारण हुने गरेका छन् यसका लागि सचेतना अभिवृद्धिसँगै नीतिगत रुपमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभ्यासमा छौं ।
९. नगरपालिकाभित्र अत्याधिकरुपमा रहेको बालविवाह र बहुविवाह रोक्न के आवश्यक देख्नुहन्छ ?
२० वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्ने नेपालको कानुनको त पालना कहीँ पनि भएको देखिदैन । यसलाई संस्कारको रुपमा विकास गर्न पढेलेखेका र बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको घरबाट शुरु गरौं । आफूलाई पर्दा तै चुप मै चुप हुने अनि अरुलाई मात्र औंला ठड्याउने गलत संस्कार कमजोर बालबालिकालाई विवाहको स्वीकृति दिनु सबैको कमजोरी हो । अब यसलाई कानुन बमोजिम नै समस्याको हल खोज्नुपर्छ । त्यसको लागि हामी जोडतोडका साथ लाग्छौं । यसलाई रोकथाम गर्नका निम्ति नेपाल सरकारको नीति बिहेबारी २० वर्षपारी भन्नेलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
१०. नगरपालिकाभित्रका द्वन्द्वपीडित महिलाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
राज्यपक्ष र बिद्रोहीपक्ष दुबै पक्षका द्वन्द्वपीडित महिलाहरु हुनुुुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामीले नीतिगत रुपले रोल्पा नगरपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा प्राथमिकतामा पार्नेछौं । द्वन्द्वपीडित परिवार र महिलाहरुका लागि हरेक क्षेत्रमा सीपमूलक हुन्छ की कसरी हुन्छ उहाँहरुको क्षमता अभिबृद्धि र चेतनागत हिसाबले अगाडि बढाउने र आर्थिक आय आर्जन सवालमा उहाँहरुलाई प्राथमिकता दिनेछौं । हामीले उहाँहरुको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनेछौं ।
११. साझा व्यक्तित्व बनिसकेको अवस्थामा दशवर्षे द्वन्द्वको कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ ?
आज १० वर्षे जनयुद्धको त्यो कहाली लाग्दो क्षण सम्झदा एकादेशको कथाजस्तै लाग्छ । मेरो छोरा सशक्तले पटक पटक मलाई बिगतको ईतिहास दोहो¥याउन आग्रह गर्छ जब म उसको सामु ती दिनका कुराहरु गर्न खोज्छु मन भरिएर आउँछ । जनवादी विवाहसँगै भूमिगत अवस्थामा सुत्केरी भएको क्षण अनि दुश्मनको नजरबाट बच्नका लागि छोरा बोकेर दिनरात हिँडेको त्यो क्षण, तोते बोली बोल्न आँटेको २२ महिनाको छोरालाई घरमा छाडेर आफू भूमिगत हुँदाको त्यो क्षण । अझैं मेरै आँखा अगाडि सहिद भएका ती योद्धाहरुको क्षण सम्झँदा मुटु भक्कानो छुटेर आउँछ । अनि सहिदका परिवारहरु महिला दिदी बहिनीहरु र उहाँका छोरा छोरीहरुलाई देख्दा निकै मुटु बिझाउँछ ।
१२. अन्तमा सुन्दर नगर, सभ्य नगर र हिंसामुक्त नगर बनाउने प्रतिवद्धता थिए । त्यो पूा गर्ने तपाईका योजनाहरु के के छन् ?
सुन्दर, सभ्य नगरपालिका बनाउनका लागि रोल्पा बाहिर पनि राम्रो सन्देश दिनका लागि हामीले विभिन्न कार्यहरु अगाडि बढाउनेछौं । नगरपालिकालाई फोहोरमुक्त बनाउने अभियानलाई अघि बढाउनेछौं । फोहोर ब्यवस्थानका निम्ति कार्य अगाडि बढाउनेछौं । खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरुमा बाधा आईपरेका छन्, यी बाधाहरुलाई फुकाउने र समस्या समाधान गर्ने तर्फ हामी लाग्ने छौं । एकघर एक रोजगारीको नीति हामीले कार्यान्वयन गर्ने, महिला, दलित, जनजातिहरु, युवा, खेलप्रेमीहरु, विषयगत समूहहरु, समुदायहरुलाई समेटने नीति, योजनाहरु हामीले नगरसभाबाट पारित गरेर ल्याउनेछौं । यो योजनाहरुलाई यहाँका सबै सरोकारवाला निकायहरुले साथ दिएर सफल बनाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा र आशा मैले लिएकी छु । यो पटक रोल्पा नगरपालिकाले एकसय जना विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा दिने अभ्यासको सुरुवात गरेको छ । हिंसामुक्त, सुन्दर र सभ्य नगर निर्माणका लागि हामीले बिशेषखाले कार्यक्रमहरु नगरसभाबाट पारित गरेर ल्याउनेछौं ।